NSA ao amin'ny trano famandrihana Archive - Zon'olombelona & Light Art avy amin'ny Fondation PixelHELPER
Tatitra amin'ny fahitalavitra
NSA tao an-trano
22 Enga anie 2011
Sticky Post By Oliver Bienkowski Posted in fampielezan-kevitra Permalink
Izay miambina ny mpiambina. Fanentanana hanaraha-maso
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 22. May 2011
Nipoitra ny hafatra ary miparitaka eran-tsegondra. Araka ny vaovao sasany, toa mihodina hafa noho ny teo aloha izao tontolo izao. Misy fiantraikany amin'ny fiainantsika ny hafatra. Mifoha aminao izahay ary mitondra anao amin'ny alina. Tsy maninona na aiza na aiza misy eran'izao tontolo izao misy elatry ny lolo. Ary misy zavatra afaka mipoitra izay misy dikany ho antsika. Ny teknolojia maoderina dia nahatonga an'izao tontolo izao ho kely. Saingy toa mihamitombo ny fifanolanana eo amin'ny faritra sy manerantany. Betsaka ny fanontaniana azonao atokisana. Ny fampahalalana azo dia mbola azo itokisana ary raha mbola misy ny fandriampahalemana sy fanambinana any Alemana. Io no tena nanombohan'ny iraka ataontsika. Ary amina tambajotra iraisam-pirenena isika dia mamorona fototra azo itokisana, indraindray dia tandindomin-doza, satria mila halavan'ny famoronana andraikitra. Integer & feno fahatokiana miaro an'i Alemaina.
Ampiharo izao - ho an'ny tontolo miloko marevaka kokoa!
TED Talk manohitra ny fanaraha-maso
Fitondrana fanaraha-maso: "NSA ao an-trano"
ary United Stasi of America nijoro teo amin'ny rindrin'ny Masoivoho Amerikanina any Berlin sy ireo konsily amerikana hafa any Alemana, anisan'izany i Dusseldorf, Frankfurt sy Hamburg. Ny anton'izany dia ny fitsikilovana manjavozavo momba ny NSA sy ny tolotra Amerikana miafina.
Ny NSA dia miaro ny paikady fanaraha-maso raha ilaina mba hiadiana amin'ny fampihorohoroana. Ankoatra izany, dia manamarina ny tenany amin'ny filazany hoe, "Raha tsy misy zavatra afeninao, tsy misy atahoranao". Indrisy anefa, ny fanaraha-maso ny NSA dia lasa lavitra kokoa amin'ny resaka ady amin'ny fampihorohoroana. Ny antso an-tariby, Skype, antso an-tariby Whatsapp dia azo henoina, na dia tsy misy ifandraisanao amin'ny mpampihorohoro aza, amin'ny fampiasana ny fitsipika "3rd Degree Friend".
Fanampin'izany, ireo teknikam-panaraha-maso ireo dia nanakana ny fanafihana 4. Sarobidy amintsika ve ny fahafahantsika misoroka fahamendrehana fa tsy misy filaminana? PixelHELPER dia tsy mino izany, izany no antony nanombohantsika ity fanentanana ity.
Ny fahombiazana voalohany taorian'ny fampisongadinana ny 13, tamin'ny rhythm isan-kerinandro sy ny fandrakofan'ny media lehibe:
Ny fialàn'ny lehiben'ny lehiben'ny CIA any Alemaina.
Izay miambina ny mpiambina. Fanentanana hanaraha-maso Aprily 21st, 2020Oliver Bienkowski
Tsy afaka manao ny fanomezam-boninahitra ataonareo ny tsy fisainanareo ??????????????????? ?????????
fitaovam-piadiana Android App Bahrain 13 Federal Chancellery Serivisy serivisy federaly Serivisy fanoratana marevaka voaroy afo Shina fanangonam-bola afo fampijaliana freeRaif fanehoan-kevitra malalaka Hercules fanampiana mahaolona fampielezan-kevitra fampielezan-kevitra Katalonia hopitaly landmines Ny fitiavana dia tsy misy fetra LiveStream Live renirano Fanampiana mivelona an-trano Loreley Maraoka mine NSA tao an-trano Oberwesel gadra politika Rainbow for Orlando fiadiana Arabia Saodita nivangongo Help Frantsay lohataona Spirulina Uighurs Uyghur fiarovana ny tontolo iainana fahaleovan-tena United Stasi of America upcycling fitaovam-piadiana ny varotra Eny ezahantsika scan! fanaraha-maso